Nifarana ny fitoriana 'Zoma faha-13'... Amin'izao fotoana izao - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Nifarana ny fitoriana 'Zoma faha-13'… Amin'izao fotoana izao
Nifarana ny fitoriana 'Zoma faha-13'… Amin'izao fotoana izao
Mbola hahita bebe kokoa ve isika ny zoma 13?
by Trey Hilburn III Janoary 2, 2022 10,553 hevitra
Telo ambin'ny folo taona no lasa ary lasa. Na izany aza, mijanona ho “maty” i Jason Voorhees ary miandry ny fiverenany amin'izay ataony tsara indrindra – miverina amin'ny famonoana andiana mpanolotsaina lasy. Mampalahelo fa toa levona ny fanantenan'ny mpankafy horohoro tamin'ny raharaham-pitsarana farany teo nanodidina ny franchise.
Raha efa nanaraka ny raharaha fitsarana ianao, dia fantatrao izany tany am-boalohany Zoma ny 13 mpanoratra, Victor Miller dia nahazo toerana kely. Ny toetra sy ny toerana misy ny Zoma ny 13 naverina tany Miller. Tany am-boalohany dia nanandrana naka ireo zo ireo ny studio ary nilaza fa mpiantoka tsy miankina ny mpanoratra.
Iray amin'ireo mpisolovava voarohirohy, Larry Zerner, izay nilalao an'i Shelly Zoma 13: Fizarana III nilaza fa tsy nametraka fitoriana momba ny zon'i Miller naverina ny fitsarana. Tsy fandresena goavana izany amin'izao fotoana izao. Mety ho zava-dehibe kokoa izany raha toa ka tonga tao amin'ny fitsarana ihany koa ny mpamokatra Sean S. Cunningham, saingy indrisy fa ny mpamokatra dia nipetraka ity iray ity. Tsy noheveriny fa azo atao ny mahazo vahana. Noho izany, tsy te handany vola izy.
Ka amin'izao fotoana izao, an'i Miller ny mpilalao ao amin'ny Camp Crystal Lake amin'ny sarimihetsika voalohany fa i Cunningham no manana ny saron-tava sy ny Jason izay mahazatra antsika.
Ny fandresen'i Miller dia tsy midika fa hahazo na inona na inona isika Zoma ny 13th sarimihetsika vita tsy ho ela. Mampalahelo fa mbola mila hetsika hafa avy amin'i Cunningham isika. Nilaza i Zerner fa eo amin'ny toerana tsara kokoa ny mpankafy saingy mbola lavitra ny sarimihetsika amin'ny franchise isika. Mampalahelo fa 13 taona no lasa hatramin'ny nahitanay an'i Jason farany teo amin'ny efijery lehibe. Tena nofinofy tokoa ny hahita ilay rangahy mamono indray, saingy amin'izao fotoana izao dia hita fa mbola lavitra ny mety hitrangan'izany.